Monday April 22, 2019 - 17:09:27 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya waxaa ka furmay shirar dhanka siyaasadda ah oo loogasoo horjeedo dowladda ay madaxda ka yihiin Kheyre iyo Farmaajo.
Madaxweynayaasha maamullada Jubbaland iyo Puntland ayaa ka codsaday waxa loogu yeero Beesha caalamka in si madax banaan ay ula macaamilaan maamul goboleedyada.
Axmed Madoobe,Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo Saciid Deni ayaa ka codsaday safiirrada dowladaha reergalbeedka ee magaalada Nairobi ku sugan in wixii macaamil ah oo ay uga baahanyihiin maamul goboleedyada ay si toos ah ula xiriiraan.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in hoggaamiyaasha maamul goboleedyada ay dadaal ugu jiraan sidii ay dib ugusoo ceshan lahaayeen xiriiradii uu horay uga jaray Farmaajo.
Dhinaca kale Hotelka Pan Africa ee magaalada Nairobi wuxuu shir uga furmay Xildhibaanno,siyaasiyiin iyo rag horay xilal wasiirro ugasoo qabtay dowladda Federaalka.
Dhinacyadan shirsan oo dhammaantood mucaaradsan hanaanka maamulka ee Farmaajo iyo Kheyre ayaa lafilayaa in ay gaba gabada kulankooda warmurtiyeed kasoo saaraan.
Wajiyada shirka kasoo muuqday waxaa kamid ah Prof Gaandi oo ah xildhibaan horayna usoo noqday wasiir, Faarax C/qaadir oo ah Xildhibaan horayna usoo noqday wasiiru dowladaha madaxtooyada, Maxamed Cali Americo iyo Xildhibaan C/qaadir Cosoble.
Sidoo kale waxaa madasha shirka ku sugan siyaasiga Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur oo kamid ah hoggaamiyaasha Xisbiyada xildoonka ah ee sida aadka ah umucaaradsan Farmaajo.
Shirarkan ka socda magaalada Nairobi ayaa waxba kama jiraan ka dhigaya dhammaan dadaalladii Xasan Cali Kheyre uu sameynayay bilihii lasoo dhaafay ee uu kusoo jiidanayay hoggaamiyaasha maamul goboleedyada iyo kooxaha mucaaradka ah.